PHOTO GALLERY Archives - MazzakoNews
हैट ! GF बुद्धको फ्यान, BF निशानको फ्यान, प्रतापको फ्यानले मौकामा चौका हानेपछि…
‘दिदीलाई घरमा हेला, भाइ पराई भूमिमा…’ यस्तो पो तीज गीत
Ranjan AC 4th October 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
‘छक्का पञ्जा २’ फिल्मले निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । नेपाली फिल्म खासै चल्दैनन् भनिरहँदा दिपकराज गिरी र दिपा श्री निरौला टीमले एक पछि अर्को सुपरहिट फिल्म बनाईरहेका छन् । चौथो फिल्म आईपुग्दा दर्शकले उत्तिकै माया पनि गरिरहेका छन् । …
Ranjan AC 24th September 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी, पोखरा / बुद्ध लामाले पहिलो नेपाल आइडल बन्दै इतिहास रचे । नेपाल आइडलमा पहिलो अडिसनदेखि नै निर्णायकहरुको मनमा बसेका बुद्ध टप १८ देखि टप ३ छनौटसम्म एक पटक मात्र डेन्जर जोनमा परे । उनलाई देश विदेशबाट उल्लेख्य भोट आयो …
Ranjan AC 19th September 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
चर्चित गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलबारे बिभिन्न चर्चा भइरहेका बेला एउटा रमाइलो सर्ट फिल्म सार्वजनिक भएको छ । गर्लफ्रेण्ड बुद्ध लामाको फ्यान र ब्वाईफ्रेण्ड निशान भट्टराईको फ्यान हुँदा प्रेम सम्बन्धमा आएको उथलपुथललाई फिल्ममा रमाइलो ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ । फलानो क्रियशनले …
Ranjan AC 6th September 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी / चाडपर्वमा सबैभन्दा नरमाईलो परदेशीलाई लाग्छ । परदेशी जत्तिकै नरमाईलो परदेशिएका आफन्तलाई लाग्छ । चाडपर्वमा सबै घर आउँदा आफ्ना परिवार एक साथ नहुँदा कसलाई खुशी लाग्छ र ? कसलाई चाडपर्व चाडपर्व जस्तो लाग्ला र ? दिनदिनै हजारौं युवाहरु परदेशिन्छन् …
Ranjan AC 18th July 2017	PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी भाञ्जाभाञ्जी जन्मेका छन्, हुर्काउँला, बढाउँला, राम्रोसँग मावलीमै राखी पढाउँला । सबले भन्छन् दुःखपछि एक छिन सुख आउनेछ पीर नगर भगवानले बाटो लाउनेछ । तीज पर्व चेलीबेटीकै हो । आमाबाबुलाई छोरी र दाजुभाइलाई दिदीबहिनीको अभाव यस पर्वमा भईहाल्छ । …
Ranjan AC 5th March 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी पोखरा / ब्युटीफुल गर्ल आरजुले रियाजलाई धेरै खोजिरहिन् तर के भेट्थिन् ? रियाज त पोखराका हुन् । उनले खोजिरहेको थाहा पाएपछि रियाज काठमाण्डौ हानिए । आरजुसँग भेट भयो । दुई दिनमै माया बसिहाल्यो । जिन्दगी नै तिमीलाई भयो …
Ranjan AC 29th January 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी पोखरा / पोखराका युवाहरुको पहिलो प्रस्तुति ‘किन कोहि’ हालै सार्वजनिक भएको छ । जतिन नकर्मीको पहिलो गीत ‘थाहा छैन किन कोहि यति राम्रो लाग्छ’ युट्युब मार्फत Songs Nepal ले सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा जतिनको स्वर छ भने …
रञ्जन अधिकारी पोखरा / ‘बाजेले गिटार बजाको, बज्यै नाच्नु लजाको । यो मेरो गीत सुन है साथी कति मजाको । बिनोद ढकाल । पप/-याप म्युजिक पारखीलाई धेरै व्याख्या गरिरहनुपर्ने नाम होईन । धादिङ आरुघाटका बिनोदले हालै सार्वजनिक गरेको गीतको शब्द …
Ranjan AC 3rd January 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY
रञ्जन अधिकारी, पोखरा/ ‘फेसबुकबाट पर्यो मेरो पोखरेलीसँग लभ, भेट्न बोलाई मायाले, छोडी आए जब् , आधी बाटो आएसी फोन हान्दा ,भन्छ मोबाईल अफ’ धादिङका ठिटोले पोखरेली युवती खुब मन पराउँछन् । त्यसैले त पोखरा सम्झिरहन्छन् । उनी पोखराकै हेम्जासम्म काठमाण्डौं …
Ranjan AC 27th September 2016	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY